Huawei က Sharelink ကို ဝယ်ယူခြင်းဖြင့် မိုဘိုင်းငွေပေးချေရေး လိုင်စင်များ ရရှိရေးမှာ ပါဝင်မည် - Pandaily
Categories: Industry ကိုGloria Li မတ် 29, 2021 မတ် 29, 2021 မှာ Posted
တရုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ Data Inquiry ဝက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့ စုံစမ်းမေးမြန်းချက်အရ Huawei ဟာ မကြာသေးခင်က သူ့ရဲ့ မိခင်ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Shenzhen အခြေစိုက် Sharelink Sharelink ရဲ့ ရှယ်ယာအားလုံးကို ဝယ်ယူခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ မိခင်ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Shanghai က လက်ထဲထည့်ခဲ့တယ်လို့ China Securities သတင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။သတင္းပို႔ထိုမွတစ္ဆင့္ Huawei သည္ ၎၏ မိုဘိုင္းေငြေပးေခ်မႈ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအျဖစ္ စတင္ထူေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ဟွာဝေးဟာ သည်နှစ်မှာတော့ မိုဘိုင်းလ်ငွေပေးချေမှုကို ဈေးကွက်ထဲမှာ တင်းတင်းကျပ်ကျပ် စိုက်ထုတ်ထားပါတယ်။ South Hua Morning Post က ‘၂၀၁၆ ခုနှစ် ဩဂုတ်လမှာ ဟွာဝေးနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး တရုတ်ရဲ့အကြီးဆုံးဘဏ်ကတ်ကိ်ု ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ ငွေချေစနစ်ကို ဟွာဝေးက မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ ဟွာဝေးက ငွေပေးချေနိုင်တဲ့ ဇီဝမှတ်ပုံ နည်းပညာကို အသုံးပြုထားပြီး နီးစပ်ရာနယ်ပယ်တွေမှာ ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ အသုံးပြုသူတွေကို ဘဏ်ကတ်နဲ့ ငွေပေးချေနိုင်တဲ့ Huawei Device Terminal အနီးကတစ်ဆင့် အရောင်းအဝယ်ပြုသတင္းပို႔.
ထိုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် Huawei Cloud Service President ဖြစ်သူ Sujayစိတ်ဖိစီးမှုကုမဏီက လိုင်စင်လျှောက်ထား ရင် Third party ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ “ (HUAWEI Cloud Services) က သူ႔ရဲ႕နယ္နိမိတ္ကို အသိအျမင္ျမႇင့္တင္ေပးမယ့္အရာေတြကို တကယ္ထူးခၽြန္တဲ့သူေတြအတြက္ အဓိကထားလုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ” ဟု Su က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာသည္။
တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ဟွာဝေးက သုံးစွဲသူ သန်း ၂၀၀ အတွက် ကြီးမားတဲ့ အခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ခု ဖြစ်တာကြောင့် မိုဘိုင်းလ်ငွေပေးချေမှုဈေးကွက်အတွက် ကြီးမားတဲ့အားသာချက်တစ်ခု ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
HUAWEI စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူဖြစ်တဲ့အပြင် Xiaomi ၊ Electricity Platform နဲ့ TikTok ပိုင်ရှင် Bytabyer တို့ဟာလည်း သူတို့ရဲ့ Third Party လိုင်စင်တွေကို ရယူပြီး ငွေပေးချေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အခြား တတိယမြောက် လိုင်စင်ရယူရာတွင် တရုတ်အင်တာနက်နှင့် လျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီကြီးများလည်း ပါဝင်ပြီး၊ Bag, Beijing, Suzing, American Group, New Wave, Net နှင့် Yi တို့ ပါဝင်မည် ဖြစ်သည်။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ခက္ခဲေသာ ပုရြက္ဆိတ္အုပ္စု Paype ႏွင့္ Tencent ၏ WeChat ေၾကာင့္ ေငြေပးေခ် မႈပမာဏသည္ Platform ႏွစ္ခုစလံုး၏ ကိုင္တြယ္ပံုထက္ ေက်ာ္လြန္ေန၈၀%Mobile Payment နဲ့ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကုမဏီတွေအနေနဲ့ မိုဘိုင်းလ်ငွေပေးချေတဲ့လုပ်ငန်းကနေ ရရှိတဲ့အမြတ်အစွန်း အတော်လေးများပြားပါတယ်။ ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ငွေကြေးအပေးအယူလုပ်ရာတွင် အခြားကုမ္ပဏီများက အခကြေးငွေ ကောက်ခံခြင်း၊ ၎င်းတို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခြင်းနှင့် ငွေပေးချေခြင်း စသည့် အချက်အလက်များ စုဆောင်းခြင်း၊ ကြော်ငြာခြင်းတို့မှ ထုတ်ကုန်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။ အချက်အလက်တွေအရစာရင်းဇယား၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံအနေနဲ့ မိုဘိုင်းလ် ငွေပေးချေမှု စုစုပေါင်း ၃၄၇ ထရီလျံအထိ ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
Topics: မြင်ကွင်းဘာကြောင့် တရုတ်ဘက်ကို ငွေပေးချေနေတာလဲ?
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် အောက်တိုဘာလက ဟွာဝေးက Mate 40 Series စမတ်ဖုန်းကို စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုက်ဆံအိတ်တွေအတွက် hardwallet ကို ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဟွာဝေးက မိုဘိုင်းလ်ငွေပေးချေမှုဈေးကွက်ကို ထိန်းချုပ်ဖို့ တရုတ်အစိုးရက ခြေလှမ်းသစ်တွေထွက်ပေါ်နေချိန်မှာ တရုတ်ရဲ့အင်တာနက်လုပ်ငန်းဟာ အလျင်အမြန်တိုးတက်လာပါတယ်။ ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာလက တရုတ်အစိုးရက ရုတ်တရက် ရပ်ဆိုင်းရန် အမိန့်ထုတ်လိုက်သည့် ပုရွက်ဆိတ်အုပ်စု၏ ပထမဆုံး လူထုရှယ်ယာဖြစ်သော ကုမ္ပဏီရန်ပုံငွေမှ ဒေါ်လာ သန်း ၃၇၀ ကျော် ရရှိမည့် အစီအစဉ်သည် သမိုင်းတွင် အကြီးမားဆုံး IPO တခုဖြစ်လာမည် ဖြစ်သည်။